Andriamanitra ao amin' ny fivavahana abrahamika - Wikipedia
Andriamanitra ao amin' ny fivavahana abrahamika
Andriamanitra ao amin' ny fivavahana abrahamika dia ilay andriamanitra tokana inoan' ireo fivavahana heverina fa nandova ny finoan' i Abrahama (dia ny jodaisma, ny kristianisma, ny silamo, ny bahaisma sy ny maro hafa, izay atao hoe fivavahana abrahamika) izay tsy mifangaro amin' izao tontolo izao sady ambonin' izao tontolo izao (mihoa-draha), tokana sy manan-tsitrapo manokana. Ireto ny madinidinika amin' ireo fivavahana ireo: ny iazdanisma, ny samaritanisma, ny fivavahan'ny Droza, ny babisma, ny rastafarisma, ny mandeisma, ny sabakisma, ny iazdanisma ary ny iazidisma.
1 Andriamanitra, araka ny jodaisma
2 Andriamanitra, araka ny kristianisma
2.1 Andriamanitra Trinite
2.2 Andriamanitra tsy Trinite
3 Andriamanitra, araka ny finoana silamo
Andriamanitra, araka ny jodaisma[hanova | hanova ny fango]
I IHVH na YHWH (hebreo: יהוה / ihwh) no anaran' Andriamanitra ao amin' ny jodaisma. Tokana ny andriamanitry ny Hebreo, maha saro-piaro azy izany araka ny didy hoe "Aza manana andriamani-kaha fa izaho ihany". Ny Tanakh.
Vokatry ny sitrapon' Andriamanitra no nampisy an' izao tontolo izao tamin'ny namoronany azy, ka noho izany dia Andrimanitra no tompon'izao rehetra izao. Tsy mifangaro amin'ny zavaboary Andriamanitra fa ivelany sady amboniny ary tsy takatry ny saina, izany hoe mihoa-draha. Tsy misy noho izany zavatra eto amin' izao tontolo izao azo anehoana an'Andriamanitra, ho fanompoan-tsampy izany raha izany no atao.
Araka ny Baiboly dia misy ampahan' ny toetran' Andriamanitra azo tarafina amin'ny toetran'ny olombelona noho ny nahariany ny olombelona tahaka ny endriny. Ao amin' ny Tanakh dia voalaza fa manam-pihetseham-po Andriamanitra: tezitra, faly, malahelo, diso fanantenana, mitsetra, mitia, na mankahala koa. Inoana koa fa Andriamanitra hendry, marina, mpamidra fo, mahatoky ary velona i Iahveh. Afaka mampanantena zavatra, afaka ny ho tezitra ary saro-piaro izy. Andriamanitra mpanjaka sy mpitsara ary miandry ny olony sahala amin'ny mpiandry ondry izy. Sarotiny izy amin'ny fitondran-tenan'ny mpanompony. Nanao fanekem-pihavanana tamin'ny vahoakany, dia ny Zanak'i Israely, izy.
Andriamanitra, araka ny kristianisma[hanova | hanova ny fango]
Nandova ny fiveheverana sasany ao amin'ny jodaisma ny kristianisma noho izy nampiasa ny boky masin'ny jodaisma, dia ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly. Nisy fiovany izany fiheverana izany taorian'ny niainan'i Jesoa Kristy teto an-tany izay ataon'ny Kristiana fa zanak'Andriamanitra tonga nofo sady ilay Mesia resahin'ireo mpaminany sady nadrasana hatramin'izay. Niteraka fikorontanan'ny finoana an' Andriamanitra tokana, araka ny ampianarin'ny jodaisma, izany fivoasana vaovao ny Soratra Masina izany, izay tsy ny Testamenta Taloha ihany fa ny Testamenta Vaovao koa sy ny boky sasany ataon'ny manam-pahaizana hoe apokrifa na pseodepigrafa, izay nampiditra voambolana avy amin'ny filôzôfia grika (indrindra ny an'i Plato) hanazavany ny toetran'ny andriamaniny.
Taty aoriana, tamin'ny taonjato faha-4, dia lanin'ny maro an'isa tamin'ireo nivory nandritra ny Kônsily tao Nikea ny tenim-pinoan'ny Trinite izay mihevitra an'Andriamanitra ho tokana nefa manana persona telo, dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Noraiketina tao amin'ny fanekem-pinoana nikeana izany sady nohamafisina tamin'ny konsily hafa taty aoriana koa. Andriamanitra ny Ray, Andriamanitra ny Zanaka, Andriamanitra ny Fanahy Masina, hoy izy ireo nefa tokana Andriamanitra. Ny tenim-pinoan'ny Trinite dia miaro ny maha tokana an'Andriamanitra sady mampivohitra ny fananan'io Andriamanitra io persôna telo izay samy manana ny anjara asany tamin'ny famoronana izao tontolo izao sy amin'ny famonjena ny olombelona.
Tsy mora ny mahazo ny tiana ho lazaina amin'ny hoe persona satria tsy azo lazaina tanteraka ho fomba fiseho samihafan'ilay Andriamanitra tokana izany araka ny hita amin'ny tantaran'ny fampanjakana ny tenim-pinoan'ny Trinite izay nanamelohana fampianarana maro toy ny môdalisma sy ny dôketisma ary ny maro hafa koa.
Niteraka fisamatsamahan'ny kristianisma nandritra ny tantarany hatramin'izao izany toe-javatra izany.
Ny Katôlika sy ny ankamaroan'ny Prôtestanta ary ny Ortôdôksa dia mino ny Trinite.
Andriamanitra tsy Trinite[hanova | hanova ny fango]
Tsy ny fiangonana kristiana rehetra no manaiky an'izany fiheverana an'i Jesoa sy ny Fanahy Masina ho Andriamanitra izany, satria maro ireo fiangonana manohitra ny Trinite ka mihevitra an'i Jesoa ho Mesia fotsiny fa tsy Andriamanitra, ary ny Fanahy Masina ho hery entin'Andriamanitra miasa.
Andriamanitra, araka ny finoana silamo[hanova | hanova ny fango]
Ho an'ny finoana silamo indray dia i Allah no anaran'Andriamanitra tokana. Midika fotsiny hoe "Andriamanitra" io anarana io. Tsy azo aseho an-tsary Andriamanitra satria tsy mifangaro fa ivelan'ny zavatra noforoniny sady avo indrindra. I Mohamady (Muhammad) no mpaminanin' Andriamanitra izay inoan'ny Silamo fa namerina indray ny firesahana marina ny amin'Andriamanitra tamin'ny nahazoany ny fanambaràna ao amin'ny Kor'any.
Tamin'ny nanambaràna ny Soratra Masina, Andriamanitra dia niteny tamin'ny alalan'ny anjely Jibrily (Gabriela) sy ny mpaminany Mohamady izay nandre ny tenin' Andriamanitra fa tsy ny feony. Sady lavitra no akaiky, sady araka ny fomban'olombelona no tsy takatry ny sain'olombelona Andriamanitra, araka ny soratra ao amin'ny Kor'any, ka zava-miafina tanteraka izy, na "ghayb", ka tsy hay ampitahaina na amin'inona na amin'inona amin'ny zavatra noforoniny. Manana toetra fito fototra i Allah, dia ny fiainana, ny fahalalana, ny hery, ny sitrapo, ny fandrenesana, ny fahitana ary ny fitenenana.
Ivon'ny finoana sy ny fomba fiainan'ny mpino silamo ny anaran'i Allah izay ifatoran'ny lafim-piainany rehetra amin'ny alalan'ny fivavahana. Tsy lahy tsy vavy Andriamanitra. Mpahary sy mahefa ny zava-drehetra sy mahalala ny zava-drehetra ary mihoatra ny zavaboary noforoniny izy. Izy no tompon'izao rehetra izao sy ny hoavy, mpitsara amin'ny fitsarana farany, niseho tamin'ny mpaminany nifandimby hatramin'i Adama ka hatramin'i Mohamady. Ny soràta 112 (Al-Ikhlas) dia mamondrona ny fotopotony amin'ny fiheveran'ny Silamo an'Andriamanitra: "Izy no Allah tokana, Allah tsy takatry ny eritreritra, tsy miteraka Izy, tsy nateraka Izy, ary tsy mitovy na amin'inona na amin'inona Izy". Ny Kor'any dia manambara koa ny toetr' Andriamanitra izay mihoa-draha tanteraka nefa milaza koa io boky io fa akaiky ny olombelona (Kor'any, soràta 50.16) sy ny zavaboary noforoniny izay isehoan'ny asany sy anehoany izany asany izany Andriamanitra.
Mitarika ny olombelona amin'ny hoaviny izay tsy fantany na ny heviny na ny vokany Andriamanitra; afaka mitari-dalana na mampania ny olombelona Andriamanitra, manasazy sy mamela heloka izy. Fantany ny antsipirian'ny fisainan'ny olona tsirairay, izy no hitsara amin'ny fitsarana farany izay hanasaziana ny mpanota sy ny tsy mino ary hamaliana soa ny mpino mahatoky. Ambara matetika ny fahatezerany ka matetika izy dia atao hoe "ilay Mahatahotra" (arabo: al-Jabbâr na al-Qahhâr). Nefa ny toetrany misongadina indrindra dia ny halehiben'ny famindram-pony izay mahery vaika ka mahasahana ny zavatra rehetra, araka ny voasoratra ao amin'ny Kor'any.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriamanitra_ao_amin%27_ny_fivavahana_abrahamika&oldid=1038803"
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 11:47 ity pejy ity.